Soaps & Bags | Sojila
Izinsipho zomhlaba weSojila zenziwe ngezandla futhi zenziwe kahle ukuze zivumelane nazo zonke izinhlobo zesikhumba ngenkathi futhi zisusa nezinkinga zesikhumba abantu abaningi abanazo. Yenziwe ngokwemvelo ngamakhambi omisiwe emvelo, akukho okokuvikela okwengeziwe. Amafutha emvelo notshwala bemvelo kuyadalwa, ngokwemvelo okuba izithako ezikhethekile. Umenzi wensipho wasendaweni, osungulwe kahle usebenza njengomkhiqizi omkhulu weSojila World Soap. Ngesizathu esisodwa esilula: ubulokhu uyilungisa isikhathi eside. Ubungoti nolwazi lwabo kuhle kakhulu.
Izinsipho ezahlukahlukene zilapha izinkinga zesikhumba ezahlukahlukene. Kusuka emqubeni, ukushiswa yilanga, izindawo ezimnyama kuye ekulinganeni kwesikhumba. Ukubala nje ezimbalwa. Ngokuzinza engqondweni, zonke izinsipho zingathengwa nangezikhwama ezilungele imvelo.
Sakhe insipho yokuhlangabezana nezidingo zeplanethi kanye nenhlalakahle yabantu. Izinsipho zethu zisiza ukugcina amadreyini ahlanzekile, ukuvimbela ukuminyana, nokukhuthaza ukugeleza kwamanzi okushelelezi. Khetha kusuka ebangeni lezinsipho zokuhlikihla nezokushelela ezilungiselelwe kahle izidingo zakho zesikhumba zamanje. Izinsipho eziphilayo zeSojila zinakekela zonke lezi zinto.
Isiqubulo sethu besilokhu “sisuka kumcabango wokuzijwayeza ukwenza”. Siqinisekisa ukuthi yonke insipho iyahlolwa kusetshenziswa ulwazi lwamadlozi ethu kanye nokulindelwe ngamakhambi ethu ngaphambi kokuthi kuhlolwe naselabhorethri. Lokhu kuqinisekisa ukuthi izinqubo zangempela namakhambi kuyasetshenziswa nokuthi ukuqondiswa kwethu kusekelwa ngokwesayensi.
I-Afrika yaziwa ngamakhambi ayo anamandla, angafakwa noma asetshenziswe phezulu. Ngakho-ke, ngaphezu kwezinsipho zethu zokugeza zansuku zonke, sinikeza nemikhiqizo yezokwelapha elandelayo.
utshwala Usawoti welamula
Yonke le mikhiqizo ye-antioxidant ikhiqiza imiphumela ehlukile.
Izinsipho zeSojila Organic Herbal zenza ukunakekelwa kwesikhumba kube lula ngokuhlanganisa izithako kanye nokwelashwa okungahle kudinge imikhiqizo eminingi kubha eyodwa.
Sizoqhubeka nokwenza imikhiqizo emisha ngokususelwa ocwaningweni lohlobo lwesikhumba kanye nokusetshenziswa kwamakhambi asendulo